लाजरस थुलुङको २० औँ पुस्तक “आशाको श्रृतु” : NepalChurch.com
लाजरस थुलुङको २० औँ पुस्तक “आशाको श्रृतु”
[0] June 9, 2019	| NC Admin
पाठक वर्गहरूमाथि आशाको श्रृतु छाउन लाजरस थुलुङको २० औँ पुस्तक “आशाको श्रृतु”
एकदमै कम सिकाइने, चर्चा गरिने र लेखिने विषय हो आशा ।
विशेष गरी नेपाली बजारमा आशा सम्बन्धी बिरलै लिखित पुस्तक, निबन्ध र कथाहरू पाइन्छन् । जिउनको निम्ति आशा एकदमै महत्वपूर्ण र अपरिहार्य तत्व भएर पनि होला यो सुनभन्दा दुर्लभ छ । यही दुर्लभ विषयमा ज्योति ग्रेट कमिसन फेलेसिप चर्चका पास्टर लाजरसले थुलुङले आफ्नो कलम चाली नेपाली जन्ता, ख्रीष्टियान तथा ग्राहकहरूका सामु आफ्नो २० औँ पुस्तकलाई “आशाको श्रृतु” नामकरणले उपलब्ध आशाको श्रृतु छाउने मनशाय राखेकाछन् ।
आशाको महत्वलाई बुझी थुलुङले “आशाको श्रृतु” पुस्तकमा निकै बेग्लै प्रकारले आशाको विषयवस्तुलाई प्रस्तुत गरेका छन् । केहीले यसलाई भट्टै हेर्दा मनोविज्ञान तथा आत्मविश्वास बढाउने प्रकारको पुस्तक सम्झिए पनि उनीहरूको कल्पनाबाट यो निकै परको पुस्तक हो । यो पुस्तकमा लेखक थुलुङले पटक-पटक एउटा महत्वपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न खोजेको पाइयो । येशू ख्रीष्ट नै आशाको मुख्य श्रोत, लेखक र पात्र हुनुहुन्छ र उहाँको मृत्यु, गडाइ र पुनरुत्थानले साँचो, स्वर्गीय र जीवित आशा उत्पन्न गर्छ । यो पूर्ण रूपले बाइबलीय पुस्तक रहेको छ उनको मुख्य श्रोतहरू बाइबल, प्रचारक, दर्शनशास्त्री, आफ्नै हजुरबा अनि भजनकारहरू रहेका छन् । साँचो, जीवित र स्वर्गीय आशा धर्म, भौतिक प्रगति र ज्ञानको प्राप्तिले होइन तर ख्रीष्टको क्रूसले ल्याउने दाबीहरू यस पुस्तकमा पाइन्छ ।
पुरानो करारबाट अब्राहाम, मोशा र योसेफ अनि नयाँ करारबाट पत्रुस र पावलको उदाहरण दिँदै कसरी बाइबलका महा नायकहरू जस्तो सुकै गम्भीर परिस्थिति आइपरे पनि आशाको कारण टिकिरहे भनी उनले आशाको ह्रि्रू र ग्रीकको शब्दार्थ दिँदै रहस्यहरू प्रकट गर्ने जमर्को गरेकाछन् । बाइबलबाट पुष्टि दिँदै यी नायकहरूले पृथ्वीको जीवनमा मात्र होइन तर भविष्यमा मृत्युपछि एक स्वर्गीय गन्तव्य, राज्य र परमेश्वरसँग हुने आशाले जिएको बताएकाछन् ।
पुस्तकभरि आशा एक सित्तैको उपहारस्वरूप परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई त्यसको उत्तराधिकारी तुल्याउनुभएको र येशू मर्नुभएर जिउनुभएको कारण त्यो आशा विश्वासीहरूको भाग हो जसले तिनीहरूलाई फलदायी बनाउँछ, रूपान्तरण गराउँछ, भविष्यलाई हेर्छ र वर्तमानमा धैर्यसाथ पर्खिरहन्छ, सुरक्षित तुल्याउने थुलुङले याद दिलाउँछन् ।
येशूमा नै किन आशा गर्नुपर्ने ? भन्ने बारे धेरैको प्रश्न हुनसक्छ तर थुलुङले यस पुस्तकको अध्याय ७ गहिकाला कारणहरू पाठकहरू माझ पस्किएकाछन् । ती कारणहरू मध्ये यी पर्छन् : आशाले साहस, भरोसा, गौरव, सुरक्षा र आनन्द दिन्छ । आशाले प्रेम, विश्वास र प्रशंसा गर्न डोर्‍याउँछ, आशा अनन्तको धन हो र यसले वैवाहिक जीवनलाई जीवित राख्छ, भविष्यालाई चियाउँछ र स्थिरता ल्याउँछ । यो ७ अध्याय थुलुङको यस पुस्तकको सबैभन्दा लामो २८ पानाहरू भएको अध्याय हो ।
लेखकको आह्वान यो छ कि सबै मानिस सत्य, स्वर्गीय र जीवित आशाको नागरिक हुनुपर्छ । यस पृथ्वीमा कोही सदाको लागि रहँदैनन् र आशा यस पृथ्वीको लागि मात्र गर्नु धोकामा पर्नु हो किनभने यो क्षणिक छ तर दीर्घकालिन अनन्त आशा गर्नुपर्छ जुन ख्रीष्टमा जडिएको हुन्छ । आशा गर्दा धेरै कष्ट आइपर्छ र कष्टलाई पार गर्ने शक्तिचाहिँ येशूमा राखिएको आशा नै हो । त्यसैले लेखकले आशाको कैदी हुनुपर्नेमाथि जोड दिन्छन् । त्यसैको लागि येशूले उपहार स्वरूप आशा दिनुभयो, येशू मर्नुभयो, गाडिनुभो, बौरी उठ्नुभो, र्स्वर्गरोहण हुनुभो अनि पुनःआगमण गर्नुहुनेछ । त्यसैको लागि उहाँले विश्वासीलाई चुन्नुभयो, उहाँको परिवारमा धर्मपुत्र तुल्याउनुभयो, पापबाट स्वतन्त्र गर्नुभयो, उत्तराधिकार तुल्याउनुभयो र पवित्र आत्माको छाप लाउनुभयो । यही आशामा प्रशस्तता छ र विश्राम छ ।
लेखकको सुझाव यो छ कि जसरी विश्वासका महा नायकहरू आशाको छाप हामीमा राखी संसारलाई फरक पारिरहेकाछन् उसैगरी हामीले पनि आशाको श्रृतुमा लागिरहनुपर्छ र यो श्रृतु आफ्नो भावी पुस्तामा छाइरहनुपर्छ किनभने विश्वासीको एकमात्र आशाको श्रृतु परमेश्वर स्वयम् हुनुहुन्छ । परमेश्वरसँग शब्दकोश छ भन्छन् थुलुङ जस अनुसार,”परमेश्वरको डिक्सनरीमा निराशा भन्ने छैन । किनकि उहाँ आशाको परमेश्वर हुनुहुन्छ,” र उनले यो पुस्तकभरि आशाको श्रृतु संसारको मौसमी श्रृतु जस्तो बदलिदैन भनेको छन् । यो आशाको श्रृतु अपरिवर्तनीय छ जसले केवल मानिस, संसार र अरू परिवर्तनशील सृष्टिलाई भलाइको लागि रूपान्तरण गर्न अगम्य सदाको लागि छाइरहनेछ ।
–थोमस बोगटी (किताबको किरो, लेखनदास)
पुस्तकको नामः आशाको श्रृतु (बाइबलीय आशा)
लेखक: लाजरस थुलुङ
वितरक: Edonai Books: Damak
Jyoti Great Commission Fellowship Lalitpur
डिजाइन र प्रिन्ट: Sarbada Printing Solutions Pvt. Ltd. Lalitpur,
फोटो सामुएल भोलन
प्रकाशक: अर्पण थुलुङ
« एज्राएलका लागि ख्रीष्‍टियन (C4i) अन्तराष्‍ट्रिय एशिया प्यासिफिक सम्मेलन सम्पन्न (सम्मेलनबारे राष्ट्रिय संयोजकको भिडियो)
पास्टर लाजरस थुलुङद्वारा लिखित ‘आशाको ऋतु’ पुस्तकको विमोचन »